लुम्बिनीको रोमाञ्चक जित « KhelkudNews.com
Published On : 23 February, 2022 9:31 pm
नेरी थापाको ह्याट्रिकमा लूम्बीनीले ललितपुर माथि दुई रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ .। बुधबार ललितपुर मेयर कप महिला टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो खेलमा नेरी थापाले उत्कृष्ट बलिङ प्रेरित लुम्बीनीले ललितुर माथि सनसनीपूर्ण जित हात पारेको हो ।.
नेरीले ह्याट्रिक यस प्रतियोगितामा दोस्रो हो । टस जितर पहिले ब्याटिङ गरेका लुम्बिनीले ४ विकेट गुमाएर ९४रनको योगफल खडा गरेको थियो .। कप्तान सरस्वती जीएमले सर्वाधिक ३१,सरस्वती पुनले २० र नेरी थापाले १५ रन जोडे ।
९५ रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले २० ओभरमा नौ विकेट ग’माउदै ९२ जोडेको हो । .
ललितपुरकी कञ्चन श्रेष्ठले सर्वाधिक २२ रनको योगदान गरिन् । प्लेयर अफ द म्याच च’निएकी नेरीले ४ ओभर बलिङ गर्दै १ मेडन सहित ८ रन खर्चेर ४ विकेट लिइन् । यसैगरी, कृतिका मरासीनी र सुस्मिता भुषालले २ विकेट हात पारे । बिहीबार लुम्बिनी प्रदेश र एक नं प्रदेशको विचमा खेल हुने छ ।